Iimpawu, ukhathalelo kunye nokuhambelana kweentlanzi zokumkani | Ngeentlanzi
Baninzi abantu abanomdla wokwazi iinkalo ezahlukeneyo ze ikumkani yentlanzi Midas. Yintlanzi eyaziwa ngokuba yidemon yobuxoki negama layo Amphilophus citrinellus. Yintlanzi ebabazekayo enobume obukhethekileyo. Esi sizathu sokuba abantu abaninzi befuna ukongeza lo mzekelo ungaqhelekanga kwiitanki zentlanzi zamakhaya abo. Ifuna ukhathalelo oluninzi ukuze ikhule kakuhle, ke ithathwa njengentlanzi yabantu abaphambili kunye namava ngakumbi ekunyamekeleni iintlanzi.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngeempawu zayo kunye nokhathalelo olufunwa yinkosi midas, le yiposti yakho 🙂
2 Inkathalo iyafuneka kwi-kingfish ekuthinjweni
4 Ukuhambelana nezinye iintlobo
Inomzimba ongekho mde kakhulu, kodwa awubanzi nokuba. Nangona inkangeleko yabo isenokukhohlisa iliso, kubonakala ngathi batyebile ngenxa yentloko yabo ekhethekileyo. Ukuba nebunzi elikhulu kangako emzimbeni ongaphakamanga kangako, unenkangeleko yokuba yintlanzi enkulu.
Umhlathi ujikeleziwe kwaye iimpiko zangasemva kunye nezempundu zide ngokwaneleyo ukuba zikwazi ukudada ngesantya esikhulu. Kukho i-dimorphism yesondo, ke sinako ukwahlula phakathi kwamadoda nabasetyhini ngendlela elula. Kufuneka siqaphele ukuba Iinkunzi zinohlobo lwe-hump entloko ekuthiwa yi-hump. Umbala womzimba uyahluka ngemibala eyahlukeneyo ukusuka kumhlophe, mnyama, tyheli okanye iorenji. Ezi zezona zixhaphakileyo ezitsala abantu abafuna isampulu kwii-aquariums zabo.
Omnye umahluko phakathi kwamadoda nabasetyhini ubungakanani. Inkunzi, ukuba nangaphambili ngakumbi, inokufikelela kwiisentimitha ezingama-30, ngelixa iimazi zincinci. Ukuba nangasiphi na isizathu ubona inkosi yokuloba enobukhulu obukhulu, ungabona ngokulula ukuba yindoda. Kukho ezinye iintlanzi ekunzima kakhulu ukwahlula phakathi kwendoda nemazi, ezinje nge Ingelosi yentlanzi, umahluko onokwenziwa kuphela ngexesha lokuzala.
Nangona bathanda ukuhlala kwiindawo ezinemilambo emilanjeni, akuqhelekanga ukuzibona kwiindawo ezinezityalo zaselwandle.
Inkathalo iyafuneka kwi-kingfish ekuthinjweni
Ezi ntlanzi zifuna ukhathalelo olukhethekileyo ukuba sifuna ukuzigcina zisempilweni nakwi-aquarium yethu ixesha elide. Okokuqala kukuba ne-aquarium enkulu (engaphezulu kweelitha ezingama-300) apho ndinokudada ngokukhululekileyo. Kuba indawo enkulu iyafuneka kwindlu ngendlu i-aquarium, bambalwa abantu abanayo le ntlanzi kumakhaya abo.
Ukuba awukwazi ukuba ne-aquarium yale milinganiselo, kungcono ukuhlengahlengisa iintlobo zeentlanzi kwitanki lakho kwaye uziqinisekise ngobomi obulungileyo. Khumbula ukuba awudlali, kodwa ujongana nezinto eziphilayo.
Nje ukuba ube netanki elincinci leelitha ezingama-300, siyakufuna umhombiso onamatye. Kuya kufuneka sizame ukuqinisekisa ukuba i-aquarium isondele kakhulu kwindawo yayo yokuhlala yendalo. Njengoko ihlala ihlala kwiindawo ezinamatye emilambo, kufuneka sibeke Izityalo ze-aquarium namatye ukuyenza ibonakale. Ukuqinisekisa nje ukuba indawo yokuhlala yabo isondele kwindalo kangangoko kunokwenzeka Siza kuqinisekisa ukuba awuzukuba noxinzelelo okanye uxinzelelo ngenxa yotshintsho lwendawo.
Ukuze sibe namabhinqa ale aquarium, siya kufuna umqolomba ukuze akwazi ukukhathalela amantshontsho akhe kwaye azive ekhuselekile. Iqondo lobushushu le-aquarium kufuneka libe phakathi kwama-24 nama-28 degrees, ungaze ngentla okanye ngezantsi.
Akukho nzima ukugcina ukutya kolu hlobo lweentlanzi. Ungamnika iintlanzi ezincinci kunokuba zinjalo, tyala ukutya okanye ukutya kwivenkile zentlanzi. Amaxesha ngamaxesha kuyacetyiswa ukuba uyinike ukutya okuphilayo ukuze ingaphulukani nobuchule bayo bendalo.
I-Kingfish ifikelela kwinqanaba lesini kwiinyanga nje ezili-9. Kwisiko lokukhwelana, indoda iba ndlongondlongo ngokuchasene nemazi ukubonisa amandla ayo okuzala. Ngenxa yoku, kunokwenzeka ukuba eyindoda ingamonakalisa. Ukuba unamadoda nabasetyhini ekuthinjweni, kungcono ukuba ulazi ixesha lokukhwelana.
Kwisiko lokukhwelana, umfazi ubonakalisa ityhubhu ye-ovipositor kwaye eyindoda yongeza kuyo. Ekubekeni kweqanda ngalinye bayakwazi ukubeka amaqanda angama-200. Abafazi bohlulwa kwindoda emva kokuba bebeka amaqanda kwaye bayahoywa. Olu hlobo lukhathalela ngokukodwa amaqanda alo ngokungafaniyo nezinye iintlobo ezinje nge intlanzi yenaliti Oku kubashiya bengenankathalo.
Ukuba sifuna ukunqanda ezi ngxaki zikhankanywe apha ngasentla ngobukrakra bendoda, kuyacetyiswa ukuba sahlule kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo zasemanzini. Ngale ndlela, inkunzi iyakwazi ukubona imazi kodwa ingadibani nayo. Oku kwenza ukuba kubenzima nangakumbi kumniniyo ukuba ne-kingfish ekhaya. Ukuba kukodwa kunzima ukuba ne-aquarium eneeelitha ezingama-300, khawufane ucinge ukuba uneqela elininzi xa bekwixesha lokuzalisa.
Amaqanda aqanduselwa ngosuku lwesibini emva kokuba ebekiwe, ke akukho mfuneko yokuba ulinde ixesha elide ukubona amathole. Ukukhusela imibungu kungcono ukuyifaka kwesinye isikhongozeli njenge usiba lokuzalela iintlanzi. I-fry iya kuqala ukubhukuda ngokukhululekileyo kwaye ikunike i-brine shrimp ukondla. Banokutya nokutya okunikwa abazali, kodwa kuya kufuneka kuqhekezwe amaqhekeza amancinci, ngokungathi luthuli.
Ukuhambelana nezinye iintlobo
Ngenxa yobundlongondlongo bale ntlanzi, kubalulekile ukuba wazi kakuhle amaqabane aya kuba nawo etankini. Kukho iintlanzi onokuhlala kuzo ngaphandle kwezithintelo ezinje iintlanzi eziqhelekileyo ze-pleco kunye ne-galaxy pleco. Nangona kunjalo, zikhona ezinye iintlobo abangenakuhlala nazo ukuba uzifaka njengomntu omdala, kodwa baphathwa ngokugqibeleleyo ukuba bakhuliswe kunye ukusukela besebancinci. Ayisebenzi kuzo zonke iimeko, kodwa inomda omkhulu wokuzithemba. Sidibana neentlobo njenge Intlanzi ka-Oscar kunye neentlanzi ezoyikekayo eziluhlaza.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokuyikhathalela kakuhle inkosi yentlanzi kwaye unganiki iingxaki ezininzi ngenxa yobundlongondlongo kunye nobunzima kukhathalelo lwayo. Ukuba unemibuzo, buza nje kwizimvo 🙂
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yaseKing
UMaria del Rosario Fernandez sitsho
Umyeni wam uthenge iikopi ezimbini ezithi, emva kweenyanga ezintlanu ekhaya, zilinganise i-10 ne-18 cm. Eyona inkulu yayinolunya kwenye intlanzi, kodwa ayenzakalisanga namnye kubo. Ewe wayihlukumeza inkwenkwana, endiva ukuba ingumfazi, ngenxa yesayizi nobume bayo. Kodwa indlela yokuziphatha kwayo ibisoloko ingaqhelekanga: imilo ibekwe nkqo, intloko phantsi, kwaye ihlala ixhomekeke kwiglasi okanye kwisihluzi. Yabekwa kwenye i-aquarium, iyodwa, kwiintsuku ezili-10 ezidlulileyo, ifakwe i-methylene eluhlaza okwesibhakabhaka, ityuwa kunye negqabi lom-oki, kuba ibonakalisa ukukhanya esikalini kunye nobukho befungus engenamakhaza. Utya kamnandi kwaye sele ephilile, kodwa uhlala esezikoneni, engadada. Undicebisa ukuba ndenzeni? Ndiyabulela kakhulu
Phendula uMaría del Rosario Fernández
Intlanzi yaseSan Pedro